HD သေးငယ်တဲ့အစေး ဦး ဆောင်သော panel ကိုမော်ကွန်းတိုက် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
1 ပြသနေသည်–12 ၏ 15 ရလဒ်
လူကြိုက်များမှုအားဖြင့်စီ နောက်ဆုံးပေါ်စီပါ စျေးနှုန်းအားဖြင့်စီ: အနိမ့်သို့မြင့် စျေးနှုန်းအားဖြင့်စီ: အနိမ့်သို့မြင့်
လိပ်စာ:SKW စက်မှုဇုန်, ရှီယန်မြို့, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့, တရုတ်
ကြော်ငြာအတွက် ဖန်တီးမှုအပြည့်အရောင် 3D Spherical LED Ball Screen
p3 မိုးလုံလေလုံ ဦး ဆောင်သောပြသမှု ဦး ဆောင်သောခင်းကျင်းပြသသည့်မျက်နှာပြင်သည်ပြင်ပအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောအကွေးကြမ်းပြင်ကို ဦး ဆောင်သည်
အကဖြင့်ကြမ်းပြင်ရှိ P2.9mm ၃.၉ မီလီမီတာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောအပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုသောဗီဒီယို display panel screen မ်ား
P6.25 Led ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ Led Interactive Video Dance Floor
မိုးလုံလေလုံသေးငယ်သည့် pixel pitch ကိုဖော်ပြသော P0.9 P1.25 P1.5 P1.6 P1.875 P1.9 P2.0 P2.5 HD ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်, ရှေ့ဝန်ဆောင်မှုမှထုတ်လုပ်သောစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည့်ဗွီဒီယိုပြသမှုအပိုင်းများ
P1.2 4K cob သည်အိမ်တွင်း HD ကြော်ငြာပြသရန်အတွက်ဗီဒီယိုနံရံကို ဦး ဆောင်သည်
သေးငယ်သော pixel pitch သည် UHD P0.6 P0.9 P1.2 P1.5 P1.9 ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင်ကိုပြသည်
P1.9 ကျဉ်းမြောင်းသောအသံသည်မြင့်မားသောလန်းဆန်းမှုနှုန်းနှင့် HD TV ပြသရန်အတွက်ဗီဒီယိုနံရံကို ဦး ဆောင်သည် 3840
သေးငယ်တဲ့ pixel pitch high definition အတွင်းပိုင်း HD LED display P1.5 ထုတ်လုပ်သူ
4K 8K P1.33 သေးငယ်တဲ့ pixel pitch video ကို Led panel wall လို့ခေါ်ပါတယ်
RGB အသေးစားအနိမ့်အမြင့် ဦး ဆောင်သော display ကိုအတွင်းပိုင်း P1.56 ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုနံရံကပ်မျက်နှာပြင်
တီဗီအတွက်ပြသထားသော p2 led display module များသည်မိုးလုံလေလုံဗွီဒီယိုနံရံတွင် ဦး ဆောင်သော panel display များဖြစ်သည်
4Ind အတွင်းပိုင်းဗီဒီယိုနံရံတွင် display P0.9 P1.25 P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 P2.5 UHD
P1.25 အတွင်းပိုင်းသေးငယ်သည့် pixel pitch သည် MBI ပါ ၀ င်သော video wall ဖြစ်သည် 5153 မြင့်မားသော Refresh Rate
led video wall display p1.875 indoor led billboard ကြော်ငြာပြမျက်နှာပြင်
high-tv တီဗီဗီဒီယိုကြော်ငြာဘုတ် p1.9mm led video display ကိုစျေးပေါစျေးနှုန်း
LED full-color display အတွက် ဗီဒီယို ပရိုဆက်ဆာကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ။? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED full-color display အတွက် ဗီဒီယို ပရိုဆက်ဆာကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ။?
အားသာချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးတည်ချက်သည် ဇာတ်စင်အငှားမျက်နှာပြင်၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် အားသာချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးတည်ချက်သည် ဇာတ်စင်အငှားမျက်နှာပြင်၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်သောအခါ ဘောင်များကို မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်သောအခါ ဘောင်များကို မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
အသုံးပြုသူအမည် (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာ*